DAALAA DHACA QATAR DAN UMA AHA SOOMAALIYA
WQ Muxyadiin Ciid
Dadka qaarkii ayaa waxa u muuqanaya dhacdooyinkii soo taxnaa tan iyo intii ay soo bilaabmatay kacdoonkii Gu'gii Carabta"Arab Spring" loogu magac daray, iyo isku dhacii 2014-ka Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Qatar.
1; Sumad u gaar ah Qatar in uu u sameeyo, ugana sooco dowladihii Khaliijka ee ay bah-wadaagta ahaayeen, si uu ula xintamo, waxa uu horumarshay dhaqanka iyo cayaaraha, waxa uu aasaasay matxafyo farshaxaneed iyo mac-hadyo waxbarasho, asagoo jaamacadihii Mareykankana wadanka keenay. Waxa uu aasaasay Teleefishinka Aljazeera, asagoo ka dhigay dube uu u isticmaalo dowladaha carabta, halka Aljazeera ayan ka hadli karin xoriyad la'aanta Qatar taal, ayadoo intaa baahisa ceebaha saaxiibadeeda Khaliijka.
Waxa uu u isticmaalay saldhiga al-Udeid air base, oo ah xarunta ugu wayn ee Mareykanku ku leeyahay Qatar gaashaan, uu wadamada reer galbeedka uga codsaday in amnigiisa balan qaadaan. Tani waxa ay dhaxalsiisay in uu dhoorka firto, cid uu u aaboyeelano ayan jirin, waxa uu ku martiqaaday wadankiisa markii ugu horeysay 1997-kii in Wafti ka socda Israa'iil uga qaybgalaan shirkii Dhaqaalaha Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, asagoo jabshay xeerarkii kala dhaxeeyay saaxiibadiisa carbeed iyo bah-wadaagtii Khaliijka.
Qatar waxa ay u isticmaashay telefishinkii Al-jaziira khilaafkii ka dhex qarxay dowladihii carbeed, ayada oo dhinaca saartay kooxihii la halgamayay dowladahooda, oo ay ku hoos nabnaayeen Argagaxisadu, ha ugu waynaadaan tii Yemen, oo Qatar kooxaha Xuutiyiinta iyo kuwa sheegta Islaamiyiintaba garab la yeelatay, tanoo keentay in dowladihii Khaliijku laba mid siiyaan in ay qayb ka noqoto Khaliijka iyo in ay banaanka marto, waxa ayna biloday in ay cadeysato in ayan garab iyo gacan la wadaagayn Khaliijka kaligeedna u socondoonto, tanoo soo dadajisay xiriirka go'ay.
Qatar Amiirka aabihiis xukunka ka ritay mar walba waxa uu dareemayay in aysan ku qanacsanayn saaxiibada Khaliijku, waxa uuna tuhmayay in aabihiis u xaglinayaan, taas ayaa ku riday sas iyo inuu hoos galo reer galbeedka, hantidii wadanku lahaa gacanta u gasho, qoladii khaliijkana yiraahdo oraahdii soomaaliyeed ee ahayd "Ama Buur ahoow Ama Buur ku tiirsanoow" balse waxa cad in uusan buugta siyaasada iyo caqliga saliimka ah midna adeegsan, sidoo kale waxa uu isku dayay in uu tumo durbaano aan isku dhawaaq ahayn, tanoo tuntii u keentay in codadka dhawaqa durbaanidiisa qolaba si u turjumtaan.
Waxaa cadaatay laba wajiilaynta Qatar, waxaana tilmaan u ah marka ay ka qaybqaadanayso Dimuqraadiyeynta Carabta, ayadu ma tahay Dimuqraadi? dadku xaq ma u leeyahay cabirkooda? Waxaa jira gabyaa Qatari ah oo xabsi dheer ku mutaystay gabay uu u tiriyay Amiirkii hore iyo wiilka uu dhalay ee hada amiirka ah, ilaa hadana waa xiran yahay, sidookale kooxaha Islaamiyiinta sheegta ee Qatar ka jiray meeye? Cagta ayaa waxa hoos gashay dowlada Qatar, hadaba maxay kuwa wadamada kale xal u raadintooda ka dheefeysaa? Tani waa wax muuqda oo kooxaha siyaasada odarasa waxa ay yiraahdaan, Qatar "Cad Afkeeda ka wayn ayay rabtaa in ay liqdo" Maanta ayay cadaatay oo cadkii ayaa dhuunta u taagan.
Sacuudiga iyo Masar ayaa ayaguna ah wadamo Soomaaliya saamayn wayn kulahaa mar walba, waxaana ugu danbaysay booqashadii Madaxweyne Farmaajo uu Sacuudiga iyo qiimaynta ay ugu fadhiday labada dowladoodba, asaagoo balanqaaday in uu qayb wayn ka qaadan doono dib u dhiska hay'adaha dowlada Soomaaliya.
Dowladaha kale ee xiriirka u jaray Qatar iska iloow, su'aashu waxa weeye Soomaaliya ma istaagi kartaa meel ay tiraahdo dhexdhexaad ayan ka nahay waxa socda, marka dowladaha kore ay kugu tirsanayaan abaal waxa uu doonaba ha ahaadee? mise Soomaaliya waxa ay ka kooftoomi kartaa isku dar Khaliijka oo Qatar-na ka maqnayn danaha kala dhaxeeya? Soomaaliya laftigeeda aya mudan in miisaan la saaro, kuwa ku xisaabtamaya Soomaaliyada maanta in ay la mid yahay Soomaaliyadii 1970-yadii jirtay, ayaa waxa mudan in ay ogaadaan halka ay dhigeen Qarannimadoodii,isku soo wada duub Soomaaliya maanta waxa ay ku qasbantahay in ay raacdo wadamada danaha badani ka dhaxeyn karaan marka loo eego tan Qatar.